‘भद्रगोल’ लाई लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै, ‘सक्किगोनी’ लाई दर्शकको साथ ? – Khabar Silo
Posted on January 22, 2020 Author admin Comment(0)
Posted on February 12, 2021 Author khabar silo
नेपालसंग साइनो रहेका बलियुड कलाकारहरु हेर्नुहोस ! बलियुड कलाकार हरु जुन भारत का भएता पनि नेपालसंग साइनो रहेका कलाकार हरु को बारेमा चर्चा गर्दै छौ ! नेपालीहरु लाई भारतीय कलाकार अर्थात बलियुड का कलाकार हरु धेरै नै मन पर्दछ बलियुड कलाकार हरुका नेपाल मा पनि धेरै फ्यान हरु रहेका छन् ! त्यति मात्र हैन केहि […]
चर्चित मोडल श्रीष्टि खड्काले खेलेको २०७८ सालको पहिलो गीतमा किरणबाबु पुनको सिर्जना (भिडियो)
पछिल्लो केहि समय एता सबैको मन मुटु जितेका चर्चित लोकदोहोरी सर्जक किरण बाबु पुनको उत्कृष्ट लय र शब्द सिर्जनामा नया बर्षको शुभकामना सहित मन लोभ्याउने लोकदोहोरी गीत ‘पिपलु बरको’बजारमा आएको छ।नर बहादुर सिंहको प्रस्तुतिमा बजारमा आएको उक्त गीत यतिबेला तहल्का मच्चाउदै छ। गीतमा लोकप्रिय गायिका जुनु रिजाल काफ्ले र नर बहादुर सिंहको सुमधुर आवाज रहेको […]
हनुमानले कसलाई ल्याएका थिए सन्जिवनी ? सोनाक्षीलाई छैन थाहा
एजेन्सीबलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा केही घन्टा यता इन्टरनेटमा हटकेक बनेकी छिन् । त्यसो त उनको ज्ञानलाई इन्टरनेट वा सामाजिक सन्जालमा बढी आलोचना गरिएको छ ।किनकि उनलाई सामान्य कुराहरु पनि थाहा रेहनछन् । कतिसम्म भने उनलाई हनुमानले कसका लागि सन्जीवनी बुटी ल्याएका थिए भन्ने पनि थाहा रहेनछ । यो प्रसंग हो, भारतीय टिभी कार्यक्रम कौन बनेका […]
गुण्डा नाइके दिपक मनाङ्गे लाई कसले गर्यो प्रहरी मा उजुरी । पुरा थाहा पाउनु होस् ।
अन्ततः अनमोल केसी र जसिता गुरुङको जोडी बाधिने पक्का…